Best HZS120 yakarerekera bhandi conveyor kongiri batching chirimwa Mugadziri uye Factory |Macpex
● JS2000 kaviri horizontal shaft yakamanikidzwa musanganisi inogamuchirwa semusanganisi wekusanganiswa kwe120 kusanganiswa kwemiti, iyo ine simba rakasimba rekusanganiswa, kusanganisa kwakanaka, kutaridzika kwepamusoro uye kushanda kwakavimbika.
● Inogona kuwana yakanaka yekusanganisa maitiro kune yakaoma, yakaoma, plastiki uye zvikamu zvakasiyana zvekongiri.Iyo yekumusoro chivharo chemusanganisi ine pombi yekupfapfaidza yemvura, gonhi rekupinda, gonhi rekutarisa uye mudziyo wekudyisa.
●Mudziyo wekudyisa unosanganisira simende, madota enhunzi, pombi yekudyisa uye mudziyo wekupinza mvura.Kuti mvura iwedzere kutekenyedza pagomba guru, pombi yepombi inoiswa pachivharo chepamusoro cheinjini huru kuona kuti shaft huru haibatike.
● inogona kuwana yakanaka yekusanganisa mhedzisiro kune yakaoma, yakaoma, plastiki uye zviyero zvakasiyana zvekongiri.Iyo yekumusoro chivharo chemusanganisi ine pombi yekupfapfaidza yemvura, gonhi rekupinda, gonhi rekutarisa uye mudziyo wekudyisa.
● mudziyo wekudyisa unosanganisira simende, madota enhunzi, chiteshi chekudyisa uye mudziyo wekupinza mvura.Kuti mvura iwedzere kutekenyedza pagomba guru, pombi yepombi inoiswa pachivharo chepamusoro cheinjini huru kuona kuti shaft huru haibatike.
JS2000 kongiri kusanganisa chirimwa.jpg
Aggregate proportioning uye chekufambisa
● The aggregate batching and conveyling part inoumbwa aggregate batching machine uye inclined belt conveyor.
● Nzira yacho ndeiyi: jecha uye yadhi yematombo - bhini rekuchengetera - metering bucket - Horizontal Belt Conveyor - yakarerekera kune bhandi conveyor.
1. Aggregate batching muchina
● Muchina wekubatanidza wakagadzirwa une mana aggregate silos, anogona kushandiswa kugadzika emhando ina dzeaggregate.
● The aggregate bin inopa zvinhu kune inoyera hopper, uye microcomputer inoyera inoyera controller inodzora vertical kuyera kwezvinhu, izvo zvinogona kupedzisa mabasa ekuyera kuseta, peeling, kukanganisa kukanganisa, kubuda kwekudzora chiratidzo uye zvichingodaro.
Pld3200 kongiri batching muchina.jpg
2. Yakarereka bhandi conveyor
● Increned belt conveyor inonyanya kugadzirwa nebhandi rekufambisa, mudziyo wekufambisa, isina basa, mudziyo wekuchenesa, furemu uye escalator.
● Mushure mekunge chiyero chakayerwa chatumirwa kunze neyakachinjika bhandi conveyor, inotumirwa kune yepakati yekuchengetedza bhakiti neyakarerekera bhandi conveyor.
● Matanho ekuchengetedza akaiswa pamativi ose emutakuri webhandi rakarereka, uye chute yakaiswa pazasi kudzivirira kuti zvinhu zvisadonha.
Powder kuchengetedza uye hurongwa hwekufambisa
● Kuchengetera hupfu uye kufambisa sisitimu ine siro yesamende uye screw conveyor.
● Nzira yacho ndeiyi: poda silo - screw conveyor - poda metering bucket.
1. Simende siro
● Simende bhini chimiro chesimbi, icho chinoumbwa nerutsigiro, humburumbira, furati gonhi, bhini repamusoro guruva muunganidzi, arch breaking device uye zvinhu zvinotakura pombi.
● Upfu hunotumirwa ku silo nemhepo yekumanikidza kuburikidza nepombi inotakura, uye gasi rekumanikidza rinogadzirwa mu silo rinobudiswa kuburikidza nemuunganidzi weguruva pamusoro pe silo.
● Zviratidziro zvemhando yepamusoro nepasi zvakaiswa mubhini rega rega resimende kuratidza kushaikwa uye kuzara kwebhini.
● Screw conveyor mudziyo unotumira hupfu huri mudura mubhaketi rekuyera mita.
● Inonyanya kuumbwa nemagetsi ekufambisa magetsi, screw shaft, pombi body, chigaro chepakati chekutsigira, inlet uye pombi yekubuda, nezvimwewo, nepamusoro-soro yekufambisa, kuiswa chisimbiso chakanaka, pasina kusvibiswa kweguruva, gungano rechikamu uye kutakura kuri nyore.
● Iyo metering system ye120 yekusanganisa chirimwa yakakamurwa kuita zvikamu zvitatu:
● Nzira yekuyera yejecha nematombo ndeyekuyera kuyera, uye chimiro chechikero chinosanganisira chiyero chebhanhire uye bucket scale;
● Kuyera nzira yesamende nezvimwe zvinhu zvehupfu kuyerwa kumwe chete, uye chimiro chacho kazhinji chikero chebhakiti;
● Kusanganiswa kwemvura uye musanganiswa zvinowanzoyerwa neflowmeter kana kuti bucket scale.
● Imba yekudzora ye120 yekusanganisa chirimwa chimiro chakamira, madziro akavharwa nechiedza chekudzivirira bhodhi, mukati wakashongedzerwa nemagetsi ekudzora maitiro ekushandisa, uye kumberi kune hombe girazi regirazi hwindo, rine nzvimbo yakakura yekuona uye yakajeka. chiedza.
Zvakapfuura: Diesel simba kongiri yekusanganisa pombi
Zvinotevera: China HZS50 yakajairika yakamira kongiri batching chirimwa